Kuboshwe abangu-32 ngelokuthunjwa kwemeya | News24
Kuboshwe abangu-32 ngelokuthunjwa kwemeya
Lichtenburg – UMeya wakuMasipala waseDitsobotla, uDaniel Buthelezi, kanye nonogada bakhe bagcine bekhululwe bengalimele ekuseni ngoLwesine ngemuva kokuvalelwa emahhovisi kamasipala, kusho amaphoyisa aseNorth West.
UColonel Sabata Mokgwabone uthe laba bakhishwe ngaphambi kwehora lokuqala ekuseni ngemuva kwezingxoxo zamaphoyisa nomphakathi obudiniwe.
Amaphoyisa ahlelele izakhamuzi ezingu-32 amatekisi amabili ukuba zingene kuwona neMeya.
Baphumile emahhovisi kaMasipala, kodwa baboshwa ngemuva kwesikhashana.
OLUNYE UDABA: Zeqile iziboshwa ezihlule ujele ngamandla
"Babhekene namacala okuthumba, ukushisa nokuzama ukubulala,” esho.
NgoLwesithathu, uthe izakhamuzi zigasele emahhovisi kaMasipala, zashisa ibhilidi.
Okhulumela uMeya, uPius Batsile, utshele iNews24 ngoLwesithathu ukuthi amalungu omphakathi abefna uMeya aphume emhlanganweni azokhuluma nabo ngezinkinga zabo ngemuva kokuba isikhathi ebebevumelane ukuba bazohlangana ngaso sesidlulile.